निन्द्रामा बर्बराउने बानी छ ? यस्तो छ यसको कारण र सत्यता « Himal Post | Online News Revolution
निन्द्रामा बर्बराउने बानी छ ? यस्तो छ यसको कारण र सत्यता
प्रकाशित मिति : २०७४, २२ आश्विन १५:५५
असोज २२,निद्रामा बर्बराउने मानिसले निद्रामै अचम्मको व्यवहार देखाउँछ र उसले बर्बराएको प्रस्ट नबुझ्न पनि सकिन्छ ।
यस्ता मानिसहरू लामो समय चाहिँ बर्बराउँदैनन् । आधी मिनेट जति बर्बराएर उनीहरू चुप लाग्छन् । हामीमध्ये केहीलाई निद्रामा कुरा गर्ने बानी हुन्छ । राति सुतेका बेलामा यसरी बर्बराउनुलाई सोम्नीलोकी भनिन्छ ।यो कुनै रोग होइन तर यसरी निद्रामा बर्बराउँदा तपाईंसँगै सुत्ने मानिसलाई डिस्टर्ब चाहिँ हुन्छ ।
मातापितामा यो समस्या थियो भने आनुवंशिक रूपमा यो सर्न सक्छ ।